Shiinaha Soosaaray Kaarboonka Fibre-dareemay soosaarayaasha iyo alaab-qeybiyeyaasha | Beihai Fiberglass
1.Waxay ka samaysan tahay fiber dabiici ah ama fiber macmal ah gogol aan-tolmo leh iyada oo la adeegsanayo xarago iyo firfircooni.
2.Qeybta ugu weyn waa kaarboon, ku uruurinta qashin kaarboon leh aag gaar ah oo gaar ah (900-2500m2 / g), heerka qeybinta daloolada ≥ 90% iyo xitaa furitaanka.
Marka la barbardhigo kaarboon firfircoon, ACF waa awood ballaaran oo wax soo nuugeysa iyo xawaare, si fudud dib ugu cusbooneysiiya dambaska yar, iyo waxqabadka korantada ee wanaagsan, ka hortagga kulul, anti-acid, anti-alkali iyo ku wanaagsan sameynta.
Kaarboonka firfircoon ee firfircoon ee la dareemo wuxuu ka samaysan yahay fiyuus dabiici ah ama macmal aan dabiici ahayn oo gogol leh iyada oo la adeegsanayo xarkaha iyo firfircoonaanta. Qaybta ugu weyni waa kaarboon, ku uruuraya kaarboonka leh aag gaar ah oo gaar ah (900-2500m2 / g), heerka qaybinta daloolka ≥ 90% iyo xitaa furitaanka. Marka loo barbardhigo kaarboonka firfircoon ee firfircoon, ACF waa mid leh awood wax soo saar iyo xawaare weyn, si fudud dib ugu cusbooneysiiya dambaska yar, iyo waxqabadka korantada oo wanaagsan, anti-kulul, anti-acid, anti-alkali oo ku wanaagsan sameynta.
Resistance Acid iyo caabin alkali
Use Isticmaalka dib loo cusboonaysiin karo
Area Dhul aad u baaxad weyn oo u dhexeeya 950-2550 m2 / g
Diameter Dhexdhexaad dhexdhexaad ah oo yar yar oo ah 5-100A Xawaare sare oo xayeysiin ah, 10 illaa 100 jeer ka badan kaarboonka firfircoon ee firfircoon
Kaarboon firfircoon ayaa si ballaaran loogu adeegsadaa
1. Fududaynta dib-u-warshadaynta: waxay nuugi kartaa oo dib-u-warshadayn kartaa benzene, ketone, esters iyo petrol;
2. Nadiifinta Hawada: waxay nuugi kartaa oo kala saari kartaa gaaska sunta ah, gaaska qiiqa (sida SO2 、 NO2, O3, NH3 iwm), uurjiifka iyo urta jirka ee hawada.
3. Sifeeyaha biyaha: waxay ka saari kartaa ion birta culus, kansarka, urta, urka caaryada, bacilli ku jira biyaha iyo inay qurxiso. Sidaa darteed waxaa si ballaaran loogu adeegsadaa daaweynta biyaha ee tubooyinka biyaha, cuntada, warshadaha dawooyinka iyo korontada.
4. Mashruuca ilaalinta deegaanka: gaaska qashinka iyo daaweynta biyaha;
5. Maaskarada afka-sanka lagu ilaaliyo, qalabka difaaca iyo ka hortagga kiimikada, fiilada miiqda qiiqa, nadiifinta hawada gudaha;
6. U dhuuqo walxaha shucaaca, xambaaraha kalluumeysatada, macdanta birta qaaliga ah iyo dib-u-warshadaynta.
7. Faashad caafimaad, ka hortag daran, kelyo macmal ah;
8. Elektarooniga, unugyada kuleylka, elektaronka iyo adeegsiga kheyraadka (awoodda korantada sare, batteriga iwm)
9. Anti-daxalka, heerkulka sare-caabbinta iyo wax dahaaran.
BET dusha sare oo gaar ah（m2 / g）
Heerka nuugista Benzene (wt%)
Nuugista iodine (mg / g)
Buluugga methylene (ml / g)
Xilliga furitaanka (ml / g)
Hore: Fibreyaasha Basalt
Xiga: Dharka Kaarboonka Firfircoon ee Firfircoon
Dareemay Fiber Fiber Fiber